Vidio: Nlekọta mmekọrịta na Search Smackdown | Martech Zone
Echere m Mgbasa Ozi MDG na-anwa ime ka ụfọdụ n'ime anyị tuo gasket mgbe anyị gụrụ aha vidiyo vidiyo a ha tinyere, Social vs Search Smackdown: Agha nke Titans Marketing na Intanet. Ma, lee, ha abịakwara ma anya ha gwụchaa vidiyo ahụ.
Mgbe anyị malitere ụlọ ọrụ anyị, ụlọ ọrụ ahụ jupụtara na ụlọ ọrụ pụrụ iche. N'ezie, ndụmọdụ mbụ m nyere onye nwe ụlọ ọrụ m bụ ọkachamara. Nke ahụ megidere kpọmkwem ihe kpatara m ji bido DK New Media - bụ n'ihi na onye ọ bụla na-alụ ọgụ maka ego ibe ya, ọ nweghịkwa onye na-achọ onye ahịa ahụ. Onye nyere CMO nọ na-akpọ oku site na ndị na-ere ozi Email, ndị na-ere SEO, ndị na-ere Social Media… ịghara ịkọ ndị na-ere ahịa ọdịnala. Ha niile wetara stats na tebụl iji kwado ihe mere ị ga-eji nọrọ karịa na ha.
Atụmatụ ahia dijitalụ nke na-arụ ọrụ kacha mma abụghị vesos, ha niile kwesịrị ịrụ ọrụ ọnụ. Ndi nnata email na-alaghachi ma na-emekorita ndi mmadu, ndi mmadu na ndi mmadu na-ekwurita okwu na ntaneti nke na-eweputa amaokwu na backlinks, nke meziri ogo gi. Mgbe ahụ ogo gị na isiokwu dị mkpa ga - enweta n'ihu ndị folks na - enyocha ma dị njikere ịzụta. Ajụjụ a abụghị nke ị kwesịrị iji, mana otu ị ga-esi lelee ma jiri nke ọ bụla.
Ọ fọrọ nke nta ka ị nweta m MDG! Ezigbo ọrụ.
Tags: mdzmdg mgbasa ozimgbasa oziChọọ Marketingchọọ na mmekọrịta mmadụ na ibe yaahịa mmadụSocial Media Marketing
Sep 11, 2013 na 4: 30 AM
Dị ka a adịgboroja SEO / SEM maka a mmalite boutique ike, M ga-achọ leverage abụọ. Social na Search na-agụnye, yabụ m kwenyere na ha kwesịrị ịga aka na ịkpụpụta ezigbo usoro ịzụ ahịa ọchụchọ.